45s USajid Javid: &#39;Nawuphi na umphathiswa ozihloniphayo&#39; uya kuzala izicelo ze-PM images and subtitles
Kuluzuko olukhulu ukusebenza njengo-chancellor we-exchequer kwaye, ngelixa ndandiyivuyela into yokuba iNkulumbuso yayifuna ukuphinda ndiyiphinde, andikwazanga ukwamkela iimeko ebendincamathisele. Ndiye ndaziva ukuba ndishiywe ngaphandle kolunye ukhetho ngaphandle kokurhoxa. Ngoku, endikuncedayo ndinenkxaso yam epheleleyo kwaye inkulumbuso iyaqhuba Ukonwabela inkxaso yam epheleleyo, njengoko urhulumente esenza. Imiqathango ebiqhotyoshelwe yayiyimfuneko ukuba nditshintshe Bonke abacebisi bam kwezopolitiko. Uyazi, aba bantu basebenze nzima kakhulu egameni, hayi urhulumente kuphela, kodwa ilizwe lonke, wenze umsebenzi omnandi. Andikwazanga ukuyamkela loo meko. Andikholelwa ukuba nawuphi na umphathiswa ozihloniphayo angazamkela iimeko ezinjalo kwaye ke, ngenxa yoko, ndive ukuba eyona nto ilungileyo yayikukuhamba.
USajid Javid: &#39;Nawuphi na umphathiswa ozihloniphayo&#39; uya kuzala izicelo ze-PM
< start="0.48" dur="3.26"> Kuluzuko olukhulu ukusebenza njengo-chancellor we-exchequer >
< start="3.74" dur="2.28"> kwaye, ngelixa ndandiyivuyela into yokuba iNkulumbuso >
< start="6.039" dur="3.621"> yayifuna ukuphinda ndiyiphinde, andikwazanga ukwamkela iimeko >
< start="9.66" dur="1.28"> ebendincamathisele. >
< start="10.94" dur="3.159"> Ndiye ndaziva ukuba ndishiywe ngaphandle kolunye ukhetho ngaphandle kokurhoxa. >
< start="14.46" dur="4.02"> Ngoku, endikuncedayo ndinenkxaso yam epheleleyo kwaye inkulumbuso iyaqhuba >
< start="18.48" dur="2.1"> Ukonwabela inkxaso yam epheleleyo, njengoko urhulumente esenza. >
< start="21.44" dur="3.9"> Imiqathango ebiqhotyoshelwe yayiyimfuneko ukuba nditshintshe >
< start="25.349" dur="1.43"> Bonke abacebisi bam kwezopolitiko. >
< start="26.779" dur="3.051"> Uyazi, aba bantu basebenze nzima kakhulu >
< start="29.83" dur="2.08"> egameni, hayi urhulumente kuphela, kodwa ilizwe lonke, >
< start="31.91" dur="1.03"> wenze umsebenzi omnandi. >
< start="33.38" dur="2.24"> Andikwazanga ukuyamkela loo meko. >
< start="35.87" dur="3.53"> Andikholelwa ukuba nawuphi na umphathiswa ozihloniphayo angazamkela iimeko ezinjalo >
< start="39.41" dur="3.25"> kwaye ke, ngenxa yoko, ndive ukuba eyona nto ilungileyo yayikukuhamba. >